Abukar Arman: Dib-u-dhaca Islaanka iyo damiirka xanuunsanaya ee Soomaalida – Radio Daljir
Maarso 16, 2018 8:01 g 0
Su’aal: Maxaa laga filan karaa hoggaanka loo dhiibey, laguna aaminey taladii ummadda iyo masiirkii dalka?
Jawaab: “Amaanada laguu dhiibtay si fiican ugaga soobax ilaalinteeda ama iska wareeji xilka!”
Maxaa qaldamey? Maxaa Soomaali iyo dunida Islaanka oo dhan maanta ka qaldan? Maxaa se sababey?
Waa mawduuc taxane Radio Daljir ah oo su’aalahaas iyo kuwo kale aan ku baadigoobeyno jawaabahooda. Asbuucaan waxa aan ku bilaabeynaa aqoonyahan, ahna dibloomaasi hore Abukar Armaan.
Sida Soomaalidu tiraahdo dadku waa culimo iyo caamo, mar kastana waxaa la fishaa in culimadu (aqoonyahan iyo diinyaqaanba) ay jihada suubaan ku hoggaamiyaan ummadda, ka saaraan tafaraaruqa, xakameeyaan xumaha, dhammeeyaan colaadda, dadka iyo dalkana mideeyaan. Illaa iyo hadda intaas Soomaali wa laga la’yahay. Maxaa sababay?
Haddaba annaga oo ku hormareyna dib-u-dhacaas ballaaran ee ku yimid ummadda, dhan walba, waxa aan su’aalaha soo socda u soo bandhigney aqoonyahan Abukar Arman.
Su’aasha 1aad ee Radio Daljir ( Su’aal RD #1): Waxa aad dhawaan qortay maqaal ay ku jirtey, “Soomaaliya waa mid matasha oo waa muraayad laga dhex arko xaalka cakiran ee dunida Islaanku maanta ku suganyahay.” Waxa aad carrabka ku dhufatay in Muslimiintu ay noqdeen dib-u-socod hormar nooc kasta looga dheereeyey, Soomaaliya haba u liidatee. Hadaba Abuukaroow side hormar loo hiigsadaa haddii wadaadkii Soomaaliga ahaa (kii gudaha wax ku bartay iyo kii Carabtaas liidata ee aad sheegtay ay wax soo barteyba), dadkana hormuudka u ahaa, waxna soo bartey uu diintii ku soo koobay shuruudaha labbiska, dherarka surweelka, nooca timajarka iyo in aan qofka Muslinka ahi masawir iska qaadin, qof kale ka qaadi karin, gabadha wajigeeda la arki karin, waxbarashadeedu aysan muhiim aheyn, oo wixii cusub oo hormar ah ama isweydiin ah, nooc kasta oo isweydiin ah sida aad qoraalkaaga ku soo qortay uu maanta wadaadkaas waxbartay uu leeyahay waa xaaraan?
Afeef Abuukar Arman: Jawaabaha kahor aan mid si fiican u iftiimiyo: Sheekh iyo caalim midna ma ihi. Waxa aan ahay nin Muslin ah oo ka danqanayo xaaladda xun iyo khatarta ay Muslinka, gaar ahaan Soomalida iyo Carabtu, maanta ku sugan yihiin.
Jawaabta Abuukar Arman (Jawaabta AA #1): Waxaan la inkiri Karin in culumada maanta ummadda hoggaamineysa ay u badanyihiin kuwa ‘awlawiyaatku’ ama sida-waxa-u-kala-horeeyaan ka qaldanyihiin. Marka aad dib u fiiriso qaabka uu Allaha Weyn risaalada (Qur’aanka) u soo dejiyay. 23 sano ayaa Nabiga (CSWS) aayado ka mid ah uu Jibriil (CS) barayay kaddibna la farayay in uu caalamka (Muslin & Gaal) gaarsiiyo. Aayadahaasna waxa loo soo dejiyay sida ay u kala muhiimsanaayeen ama xilli ahaan uggu habboonaayeen. Cilmiga uuguna horeeyo imaanka, fahanka, iyo sabarka ayaa wax waliba laga soo hormariyay xilligaas oo Kacbadii ku jirto gacan Gaalo. Xikmad Alle soo kama danbeynin? Soo in culumadeenna ku cibra qaataan ma aha?
Sunnada Nabiga (CSWS) waxey noo xaqiijineysaa in cilmigu uusan ku koobneen diinta. Iyo in cilmiga iyo xikmadduba laga qaadan karo cid kasta (Gaalo ka mid tahay) haddii ayesan khilaafeynin Qur’aanka iyo Axaadiista.
Allehii nagu maneystey caqliga, fahanka iyo fakarka oona aayado badan ee Qur’aanka kaga hadlay nooma uusan siinin aayadahaas in aanan isticmaalin. Isticmaalkooda waa nagu waajib.
In kasta oo maanta Muslinka intooda badan ay caadeysteen dhaqanka amaba bidcada ah ‘Sheekh hebel ayaa yiri ee ka hadal ma leh’ diinta Islaamka meel kagama jirto. Imaam Maalik ayaa asiibay marka uu yiri isaga oo cashar ku bixinayo Qabriga Nabiga (CSWS) dhinaciisa: ‘Marka laga reebo shaqsiga ku duugan qabrigaan, culumadu fahankooda waa lagu raacayaa marka ay asiibaan waana lagu diidayaa marka ay qalad wax u fahmaan.’ Si kastaba ha noqotee culumadu ixtiraam ayey mudan yihiin.
Su’aal RD #2: Mid kale oo isla su’aasha kore la xiriirta baa ayana ah qofkii ka horyimaada fasiraadda kooban ama xataa qaldan ee wadaadada Soomaalida qaarkood, maalinka danbe masaajidkaa laga naadinayaa, dalkana laga cayrsanayaa, qaar la gaaleysiinayaa, mid danbena dib uma hadli karo, mana keeni karo wax isweydiin iyo aqoon isweydaarsii ah. Haddaba dalkaas iyo dadka saas noqday sidee loo maareeyaa afkaartooda, IJTIHAD-na looga dhexdhaliyaa bulshada, siiba dhallinta hadda afka la qabtay ee la caburiyey?
Jawaabta AA #2: Culumada Islaamka ee diinta oo dhan ku soo koobtay cibaadaatka (salaadaha, soonka, sakada iyo xajka) oo yareystay mucaamalaatka ama sida Bini Aadamka Mulisinkiis iyo Gaalkiisaba loola dhaqmo waa kuwa Alle iyo Rasuulkiisa ka been abuurayo hadii uusan jahli u geysanin. Qur’aanka marka aad dhuuxdo waxaad arkeysaa in aayadaha looga hadlayo mucaamalaatka ay ka badanyihiin kuwa uu Alle (SWT) uuga hadlayo mucaamalaatka. Sidoo kale Axaadiista.
Si aan caalamka uula dhaqanno oo tartanka adduunka maanta ka jira ee xag siyaasad, dhaqan, dhaqaale, diin, amni saameyn ku yeelanno waa in maskaxda shaqsiga Muslinka ah katiinadaha laga furaa inta eysan arrintu gaarin katiino-jabis. Boqollaal sanadood ayaa shaqsiga Muslimka ah loo diiday in uu ijtihaado. Ijtihaadku waa sunno ay diinteenna noo baneysay marna waaba waajib. Tusaale waxa kugu filan Kutubka Qur’aanka ee guryaheenna iyo masaajidadeenna yaal waxaan ku helnay ijtihad uu Khaliifki Seddexaad Cusmaan Bin-Cafaan (RA). Sidoo kale Taraawiixda aan jamaacada ku tukanno Soonka ee uu Khaliifki Labaad Cumar Ibn-Alkhataab (RA) ku ijtihaaday.
Sidoo kale marki Cumar (RA) oo Yemen ku socda isaga iyo Saxaaba kale loo sheegay in uu Yemen ku faafay daacuun. Cumar waa ijtihaaday markaas ayuu amray in Madiina lagu noqdo. Qaar Saxaabadi ka mid ahaa ayaa ku qabsaday oo yiri ‘Soo ma aha in aan qadarka Alle raalli ku noqonno? Haddii Alle noo qoray daacuun in uu nagu dhoco waa nagu dhacayaa’. Cumar ra’yigiisi ayuu ku adkeystay. Sidii ayaa Madiina loogu soo noqday ayadoo qaar Saxaabadi kamid ah u careysan yihiin Cumar. Saxaabi kale ee kamid ahaa kuwi Madiina ku haray ayaa maqlay wixii dhacay markaasuu u sheegay: Wallaahi waxaan maqlay Rasuulki Alle oo leh ‘Haddii Daacuun ka dillaaco magaalo aad joogtaan ha ka bixina meesha aad joogtaan ilaa uu idin gudbo. Haddii uu Daacuun ka dillaaco magaalo aad ka maqantihiin ha galina oo ka jooga ilaa uu ka gudbo’.
Ijtihaadka aan diinta kahor-imaaneynin waa mid bannaan waana wax maanta laga la’yahy culumadii iyo waxgaradkii ummadda jiheyn lahaa. Taasi waxa dheer in loo arko shakhsiga soo warqaada ijtihaadku uu yahay ruux fitno doon ah. Culumada saas aaminsan badankood waa kuwa ama dana gaar ah ilaalinayo, ama fahankooda diineed aad u yar yahay, ama cabsi weyn ka qabo in maangaabta bulshada la boodaan arrintaas. Waa run ruuxa ijtihaadayo waa in uu fahankiisa ama fahankeeda diineed fiican yahay.
Su’aal RD #3: Haddii “biloow sookabasho” ay ka jiri karto Soomaaliya, waa mid la rabo in ay ka bilaabato dhallinta Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee afka la qabtay oo la caburiyey, ayna caburiyeen aqoonyahaniin kale ee Soomaaliyeed. Bal hadde ogow, dowladi ma caburin, kaligitaliye ma caburin, ee aqoonyahan ina adeerkiis ah baa afka qabanaya ee hadaba maxaad kula talin laheyd dhallinta Soomaaliyeed ee afka la hayo iyo kan caburiyaba oo u diidan in ay la yimaadaan wax fikir ah oo aan ka aheyn kiisa ama kan kooxdiisa?
Jawaabta AA #3: Diinteenna xaq ayey u siisay qofka Aadamiga (Muslin & Gaal) in uu xor u noqdo fakarkiisa iyo qowlkiisa. Alle ayaa kula xisaabtamaya ruux kasta. Dhallinyarada waa in ay maskaxdooda si fiican u adeegsadaan. Waa in ay la yimaaddaan “cilmun naafic’ cilmi wax-tar leh. Taasi macnaheeda ma aha waa in ay diinta oo kaliya bartaan. Cilmi kasta ee wax-tar leh diintu wey ogoshahy.
Dhallinyarada waa in ay dantooda, tan reerkooda, tan bulshadooda iyo tan ummadooda ka fakaraan. Waa in ay himmad weyn la yimmaaddaan. Waa in ay ka fakaraan sida dhibaatooyinka maanta Soomaalida iyo guud ahaan Muslinka heysta wax uuga bedeli lahaayiin. Waa in ay xarigga Alle ku dheganaadaan oo niyad sanna la yimmaaddaan. Waa in ay xadgudub iyo dulmi iska ilaaliyaan. Waa in ay la yimaaddaan maskax furan oo aan kibir wadin. Taasi waxa aan uugala jeedaa marka ay dhacdo in fakarkooda iyo diinta iska horyimaaddaan oo daliil cad loola yimmaaddo ay fakarkooda bedeli karaan.
Su’aal RD #4: Dowlad wanaagga aad had iyo goor u dooddid waxaa lagu gaari karaa in marka hore la helo dad wanaagsan. Sidee haddaba loo helaa dad wanaagsan, haddii aasaaskii hoose ee lagu abuuri lahaa dadkaas wanaagsan uusan dalka ka jirin, haddii dadkii jirana aan kuwo kale u oggolayn la imaanshaha fikir ka duwan kooda?
Jawaabta AA #4: Waa runtaa. Isbeddel dhab ah wuxuu yimaaddaa marka la helo dad isbedelkaasi ehel u ah. sida Alle (SWT) noogu sheegay Qur’aanka. Tan kale, marna lagama quusto rajada ah in Alle SWT markuu doono ayuuna xaalkeena bedeli karaa. Saas oo ay tahayna Ilaahey duulna arrinkooda wax kama bedelo ilaa waxa laabtooda ku jira wax ka bedelaan. Waa in aan la nimaadno niyad-sami, is-cafis, caddaalad, iwm. Haddii taasi la isla fahmo waa in dhamaan inta tarbiyadda ama kobcinta barbaarta wax ka geysan karta wada shaqeeyaan. Waalidiinta, culumada, waxgaradka, macallimiinta, suugaanleyda, iyo dhamaan hoggaanka bulshadka waa in ay ka qaybqaataan. Taasina waxa ay imaan kartaa marka diinta la yasiro sidi Nabiga (CSWS) sunnadiisu aheyd. Culumada maanta waxa ay u badanyihiin kuwa u baahan xasuusin ama nasteexo. Waa in laga fogaado kuwa ku qufulan abtirsi-diimeed oo diida ama xaaraan uugu yeera fahan kasta oo kooda ka duwan.
Ugu danbeyn, diinteennu ma aha mid hormarka diidan, wax walba oo aan ka aheyn INTA FARA-KU-TIRISKA AH EE ALLE XAARAANTIMEEYAYNA waa inoo xalaal. Sheekh ama Shariif xaaraantinimeyn karaana ma jiro.
Soo socda … La soco wareysi Radio Daljir uu Abuukar Arman kala yeeshay amuuraha kore
Waa taxane Radio Daljir oo dulucdiisu tahay:
“Dib-u-dhaca Islaanka iyo Damiirka Xanuunsanaya ee Soomaalida”
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20685